Sina 100% landy vita amin'ny landihazo vita amoron-dranomasina vita amin'ny lamba famaohana amoron-dranomasina, lamba famaohana lehibe miaraka amina mpanamboatra sy mpamatsy lamba famaohana malefaka haingana | Hefei Super Trade
100% landihazo vita amin'ny landihazo vita amoron-dranomasina misy lamba famaohana an-dranomasina, lamba famaohana vaventy miaraka amina mpitroka malefaka sy lamba famaohana haingana
Ny lamba famaohana an-dranomasina Velor jaquard dia vita amin'ny landihazo 100%, tian'ny olona izy noho ny lokony marevaka, ny fahatsapan'ny tànany malefaka. Tsy afaka mamafa ny vatanao fotsiny aorian'ny fandroana na filomanosanao, fa hampafana anao ihany koa rehefa mahatsiaro mangatsiaka any ivelany ianao.
TRANO HOTEL SY SPA QUALITY: Vita amin'ny landihazo tena izy 100% ho an'ny fiononana sy firavoravoana faratampony.
Miaraka amin'ny paozy tsara tarehy, ny lafiny eo aloha dia veloranta miaraka amina jaquard tsara tarehy na endrika amboamboarina, terry lry terry any aoriana miaraka amina endrika mitovy nefa miaraka amin'ny loko mifanohitra.
Entana Lamba famaohana amoron-dranomasina any Velor
Habe 75x150cm, 86x160cm na namboarina
Lanja 400gsm-550gsm na namboarina
Famantarana ny sary famantarana ny peta-kofehinao / logo jacquard / lable tenona
Loko / volavola namboarina
QUALITY LUXURIOUS - Vita amin'ny landihazo 100% ho an'ny halemem-panahy farafahakeliny, hafanana sy faharetana, TSY misy loko mihasimba, TSY MISY fihenan-danja, TSY MISY mandatsaka isaky ny manasa na mampiasa.
Teo aloha: Fiononana Royal sy malefaka miloko marevaka Velor Terry Beach lamba famaohana misy loko mamirapiratra vita amin'ny landihazo 100%.
Manaraka: Lamba firakotra boribory amoron-dranomasina lehibe, boribory fasika matevina porofo faingana maina rano malefaka mpitroka Mandala Picnic Yoga latabatra fanaronam-baravarankely Tapestry Mat manipy rojo vy amin'ny dia, 59
Lamba famaohana vita amoron-dranomasina Velor
Lamba famaohana Velor Jaquard
Cover Milky Flannel Duvet, Farafara fandriana microfiber, Lamba latabatra PEVA, Mpihazakazaka latabatra, Fandriana volon'ondry coral, lamba famaohana an-dakozia,